रुपन्देहीमा ४८ जनामा डेंगु संक्रमण | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य भाद्र १९ २०७६ ekhabarnepal
रुपन्देहीमा ४८ जना डेंगुका बिरामी फेला परेका छन् । दुई वर्षअघि भयाभह रुप लिएको रुपन्देहीमा वर्षा रोकिनासाथ बिरामी फेला परेका हुन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा डेंगु भेटिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. राजेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार बिरामीको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । भदौं १८ गतेसम्म ४८ जनामा संक्रमण देखिएको उनले जानकारी दिए।
रुपन्देहीमा अहिलेसम्म चारजनाको मृत्यु भएको छ । गतवर्ष ३८ जना मात्रै बिरामी भेटिएका थिए । दुई वर्षअघि भने बिरामीको संख्या एक हजारभन्दा बढी थियो ।
जमेको सङ्लो पानीमा डेंगु फैलाउने लामखुट्टेले प्रजनन् प्रक्रिया गर्ने भएकाले वर्षा रोक्रिएसँगै रुपन्देहीमा पोजिटिभ बिरामी भेटिएका हुन् । स्वास्थ्य कार्यालयले रोग फैलाउने लामखुट्टे मार्नका लागि अभियान थालेको छ ।
चिकित्सकले ज्वरो आइहालेमा कुनै औषधि नखाई अस्पतालमा परीक्षणका लागि आउन आग्रह गरेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. कृष्ण खनालले अस्पतालमा बिरामीको संख्या दैनिक बढिरहेको बताए ।
स्वास्थ्य प्रमुख गिरीले स्थानीय तहले किट किन्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । 'हामीलाई समन्वयको जिम्मेवारी छ, संघीय सरकारबाट किट आउन ढिलाई हुने संकेत देखिएको छ, उनले भने,'स्थानीय तहले छिटो पहल थाल्नुपर्छ ।'
स्वास्थ्यकर्मीले नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । सावधानी अपनाए डेंगुको संक्रमण नहुने भन्दै घर वरिपरी सफा राख्न आग्रह गरेका छन् । डेंगु एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले टोकेपछि हुने एक प्रकारको ज्वरो हो । लामखुट्टेको लार्भा हुर्कने स्थान नष्ट गरे बच्न सकिने डा. गिरीले बताए ।